kubudikidza Lesley Sheridan
misi First zvinogona kuchinja upenyu hwedu. Ndinoziva kuti kana uri pari zvino kugadzirira mumwe, Ini pamwe chete akaita wako dumbu pafiripi, uye kuti Ini ruregerero! Nzira yakanakisisa kupinda musi wokutanga ndiko kuzorora, saka kukanganwa kuchinja upenyu-hwose chinoumba. pachinzvimbo, ngatimboonai kurukurirano.
Saka kazhinji, tinofunga okutanga misi vakaita basa kubvunzurudzwa, izvo zvechokwadi anogadza mutambo kumunetsawo kwete zvachose inosimudzira zvokungonakidzwa, uye chinonyanya vanowanzomhanyira kuti yebasa iri kutya, rudyi? Kana tiri huta, dzimwe nguva tinokanganwa kupfuura dzinonetsa kutaura mudziyo sezvo pedu: achiteerera.
Izvi zvinganzwika nyore, asi zviri zvinoshamisa sparse munyika yanhasi. Tine pfungwa zvikuru pakugadzirira witty enhando edu kana akakwana wakurukura kuti isu ukaregeredza zvizere nomuimbirwo kuti mumwe munhu. Ndanzwa yakawanda zvikuru mumwe-liners, uye ndinoda kusetsa vakomana, asi zvakadini mukomana uyo chaizvoizvo anoteerera zvaunotaura? tsime, iye mufudzi. Kana iye kusetsa, wo, ipapo unofanira zvakakomba yarova jackpot.
Men vanoda mukadzi anoteerera, wo! Handisi kutaura pamusoro kungonzwa mashoko anoti, kunyange ari dzinonetsa rokutanga danho. Chaizvoizvo mashoko ake, ake matauriro, ake mutauro muviri, uye zviito zvake. Vakadzi vanowanzotevedzera unyatsoteerera izvi zvakanaka, asi kutanga mazuva, isu kazhinji kuti saka nezvezvandaifanira pachedu (mapfekero edu, bvudzi redu, zvokudya nemazino edu, anobhadhara, uye lipstick reapplications) kuti tinokanganwa nei tiri chaizvoizvo ikoko.
Kuteerera zuva wako chepakarepo anosimbiswa kubatsira kurukurirano nokuyerera. Bad yokuteerera unyanzvi, Nyorai A unhu? Heunoi inonyatsoita:
1. mubvunzo: Kana kwenyu zuva hurukuro pamusoro basa mabasa kana zvido kuti havanzwisisi, kana mirayiro chinhu kubva Muterere iwe ndambonzwa, havanzwi upenzi kubvunza mibvunzo. Kumbira kure. Vanhu vanoda kutsanangura chii vanoziva zvakawanda pamusoro, uye unofanira chete akashandura zuva wako nyanzvi, kana zviri motokari injini kana Sushi. Ndiani asingadi sokuti nyanzvi? Tinowanzofunga kutaura zvakawanda pamusoro kuchiva edu, saka uri nokuzivana kuti munhu nenzira inonzwisisika.
2. kumbomira: Kubvumira kwenyu zuva nguva kupedzisa mafungiro ake akanaka mureza - uye anogona kuratidza kuoma kana uri kufara kana huta - asi kuushandisa rimwe danho kure anogona here kupa ruzivo. Imwe nzira huru yokuita izvi zviri kutora sveta mvura sezvo munhu mokupedza pfungwa. Zvinopa vanhu runyararo kuzadza, uye nguva zhinji iwe kuziva zvakawanda pamusoro pavo kubva inclusions izvi.
3. urombo: Pamwe iye achangopedza dhigirii wake, kana zvichida iye nokuda kukwidziridzwa. Funga kuti waizonzwa sei kuti nzvimbo. Zvichida waizoda kutaura pamusoro chaunofarira makirasi, zvaunoda kuita mumunda, kana zvirongwa unofanira akashanda kukwira manera. Zvino imi mune mibvunzo makuru. Iyi ndiyo nguva apo mafungiro oudyire kunogona kubatsira chaizvo kudzidza mumwe.
4. dzokorora: Kana uri kudaro kunetseka uye huta kuti une broccoli rakabayirwa mazino ako uye chete havagoni kufunga nezveupenyu basa rake apo kunzwa yokungotevera zvinofungwa kuti chiine mubhanhire renyu, panguva chaizvo kuvaduku edza tonotora mashoko anokosha. Akabatana kutaura mashoko kupinda? Zvino unogona kubvunza mibvunzo pamusoro kworudzii date, kana iri chinhu anoda, kana anoshandisa vakawanda yakawanda zvine caffeine wokupona naro. asi chokwadi, kukanganwa tsindirana kana muchikwanisa, uye wakarurama kumubvunza!
Ehe saizvozvo, kubvunza mibvunzo pamusoro wako zuva Pet(S) Zvinokurudzirwa. Kwete mhuka anoda? Check, ndapota. Ndinotaura izvi muna (uye kwemarudzi zvakakomba.)
Nakidzwa zuva rako rokutanga, dekara, uye unakirwe! Just yeuka kuteerera. upenyu hwako angabvuma chaizvoizvo shanduko, asi Hey, hapana kumanikidzwa.
Ko vakomana kufunga panguva pabonde? Uyu mubvunzo mumwe kuti zvichida akanga kukunetsa vakadzi kubvira ...